427s တိုကျိုဘူတာအကြောင်းကိုသိရန်7အရာ | japan-guide.com images and subtitles
တစ်ရက်လျှင်ခရီးသည်သန်းတစ်ဝက်ကျော် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောတိုကျိုဘူတာသည်အလုပ်အများဆုံးသောဘူတာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ဂျပန်မှာ။ ဘူတာရုံသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကပင်အများပြည်သူအတွက်ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်လာသည် ဂျပန်၏ကျန်မှတိုကျိုချိတ်ဆက်အချက်အချာ။ တိုကျိုဘူတာသည်ရထားလိုင်းများစွာအတွက်သုညမိုင်အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးချစ်သောတိုကျိုဘူတာသည်နှစ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည် နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး။ Marunouchi ဘက်ကိုမကြာသေးမီကရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဘုန်းအသရေအဖြစ် Yaesu အဖြစ်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည် ဘက်ခေတ်မီခြင်းနှင့်ခေတ်ပြိုင်ကြည့်ပေးထားပါတယ်။ ယင်း၏မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်နှင့်ကျယ်ပြန့်မြေအောက်ပူဇျောသက်ကာစျေးဝယ်၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနှင့်အတူထမင်းစားခန်း နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, ကတိုကျိုဘူတာရုံနှင့်၎င်း၏အနီးတစ်ဝိုက်တွင်တစ်ရက်လုံးချိတ်ဆွဲဖြုန်းဖို့လွယ်ကူသည်။ သင်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်တိုကျိုဘူတာနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သောအချက် (၇) ချက်ကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။ JAPAN ရထားလမ်းCaféအဆိုပါ JAPAN ရထားလမ်းCaféက၎င်း၏မျိုး၏ပထမဦးဆုံးခဲ့ ဂျပန်မှာဖွင့်လှစ်ရန် တိုကျိုဘူတာ၏ Yaesu Central Gate နှင့်ဖြတ်ပြီးတည်ရှိပြီး၎င်းသည်ခရီးသွားခြင်းဖြစ်သည် ကောင်တာများနှင့်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းမှုခရီးသွားများအတွက်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဂျပန် ဟင်းလျာများ။ JAPAN RAIL CAFE မှအတွင်းပိုင်းအလှဆင်ခြင်းနှင့်အမှတ်တရလက်ဆောင်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ပြောင်းလဲ၍ အာရုံစိုက်သည် တစ် ဦး ချင်းစီအချိန်ဂျပန်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားဒေသ။ အဆိုပါခရီးသွားတန်ပြန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုအပန်းဖြေအကြံဉာဏ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များအဖြစ် process ကိုအနည်းဆုံးန်ထမ်းများ ရထားလမ်းနှင့်လက်မှတ်ဝယ်ယူမှု။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်ခရီးစဉ်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်ပေးပါသည် နေရာအသစ်သို့သွားရောက်ခြင်းအခါ။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုကခရီးသွားဗီဒီယိုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများစွာကိုပြသသည်။ ကဖေးသည်ပျူငှါနွေးထွေးသောပျင်းရိဖွယ်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်အချိန်လွန်ရန်အလွန်ကောင်းသည် မပြုမီသို့မဟုတ်ရထားစီးနင်းပြီးနောက်။ ညစာစားသူများသည်ဂျပန်ဟင်းလျာများကိုမျှော်လင့်နိုင်ပြီးအမျိုးမျိုးသောအရက်နှင့်တွဲဖက်နိုင်သည် နှင့်အရက်မဟုတ်သောအချိုရည်။ သေတ္တာများ Bento ဖွစျပါတယျ Takeaway လည်းအချိန်ပေါ်တိုတောင်းနေသောသူတို့အဘို့, ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကဖေးအပိုင်းတွင်အစဉ်အလာအရအလှဆင်ထားသော tatami ဖျာခင်းသည် visitors ည့်သည်များအားကမ်းလှမ်းသည် အထိမ်းအမှတ်ဓါတ်ပုံတွေကိုယူတဲ့ photogenic နေရာတစ်ခု။ တိုကျိုဘူတာတစ်ဦးလစ်လပ်အကြွေစေ့ Locker ရှာဖွေခြင်း ecbo ရင်ခွင်ဝန်ဆောင်မှု အထူးသဖြင့်အထွတ်အထိပ်ရာသီတွင်အချည်းနှီးရှာဖွေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ecbo ရင်ခွင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ထိုအခက်အခဲများအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည် အိတ်ကို-အခမဲ့နေ့ကထွက်။ နေ့များစွာခရီးဆောင်အိတ်များစောင့်ရှောက်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကို ecbo ရင်ခွင်နှင့်လည်းကမ်းလှမ်းထားသည်၊ ၎င်းမှာကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် နေ့ချင်းညချင်းခရီးသွားရန်အလင်းရောင်သွားလိုသူများအတွက်။ တိုကျိုဘူတာထဲမှာမျိုးစုံ ecbo ရင်ခွင်ကောင်တာရှိပါတယ်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်များကိုကြိုတင်မှာယူပြီးဂေဘိုတွင်ငွေပေးချေပါ မင်းရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်တွေကိုဖယ်ဖို့နေ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ တ်ပြီးကောင်တာကိုသွားပါ။ တိုကျိုဘူတာ Marunouchi အဆောက်အဦးမူလတိုကျိုဘူတာအဆောက်အဦဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းကထင်ရှားကျော်ကြားသောဂျပန်ဗိသုကာ Tatsuno Kingo နှင့် 1914 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ သို့သော်ဘူတာရုံအဆောက်အဦကြီးကြီးမားမား WW2 နှင့်တစ်ခုသာရိုးရှင်းသောဗားရှင်းစဉ်အတွင်းပျက်စီးခဲ့သည် အဆောက်အ ဦး ၏စစ်ပွဲပြီးနောက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းဘူတာရုံအဆောက်အအုံကိုစစ်မတိုင်မီကပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တငျ့တယျခံရဖို့ဘူတာရှေ့တွင်အတွက် Plaza များအတွက်အခြားငါးနှစ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့, ည့်သည်တွေကတော့တိုကျိုဘူတာကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ် ၁၉၁၄ တွင်မြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ဘက်စွန်းပိုင်းရှိအမိုးခုံးများဖြင့်ပြည့်စုံသည်။ တိုကျိုဘူတာပြခန်းအဆိုပါတိုကျိုဘူတာပြခန်းတစ်ခုအနုပညာပြတိုက်ဖြစ်ပါသည် တိုကျိုဘူတာရုံ Marunouchi အဆောက်အ ဦး အတွင်း၌တည်ရှိသည်။ ယာယီပြပွဲအပြင်, ပြခန်းအချို့ကြည့်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် မူရင်း brickwork နှင့်တစ်မူထူးခြားသောကမ်းလှမ်းရာတိုကျိုဘူတာ၏ပြည်တွင်းရေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်း, အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၏ရောစပ်။ တိုကျိုဘူတာမှတစ်ဆင့်ခရီးသွား Shopping ည့်သည်များနှင့်ခရီးသွားလာခြင်းသည်ဘယ်တော့မှဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ် ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့သို့မဟုတ်မ may လိုအပ်နိုင်ပါသည်တစ်ခုခုရှာတွေ့မဟုတ်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်။ билетသည့်withinရိယာအတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဈေးဆိုင်များစွာရှိသည် တိုကျိုဘူတာရုံ၏အခမဲ့toရိယာဝင်ရောက်ခွင့်၌တည်၏။ အဆိုပါလက်မှတ်ဧရိယာအတွင်း Gransta နှင့် ecute စျေးဝယ်ဖြစ်ကြပြီးရှိရာတဦးတည်းဒေသများညစာစား သွားရန်သွားရန်အစားအစာများ၊ အချိုပွဲများနှင့်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများစွာကိုရှာဖွေနိုင်သည် Ekibenya Matsuri, တစ်နိုင်ငံလုံးမှ boxed နေ့လည်စာရောင်းချနေတဲ့နာမည်ကြီး bento စတိုးဆိုင်။ access ကိုဧရိယာမှအခမဲ့အတွက်အပြင်ဘက်မှာမီးဖိုချောင်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်အများအပြားစားသောက်ဆိုင်များ၏တဦးတည်း ထမင်းစားခန်းအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းဇုန်။ The Tokyo Station Hotel Tokyo Station Hotel ကို ၁၉၁၅ တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် ရေခြားမြေခြားများနှင့်ဒေသအလိုက်ထံမှပုံမှန်ဧည့်သည်များမှဇိမ်ခံဟိုတယ်တွေကိုကူညီနေတဲ့။ တိုကျိုဘူတာရုံ Marunouchi အဆောက်အအုံအတွင်း၌တည်ရှိပြီးဂန္ထဝင်ဥရောပပုံစံဇိမ်ခံပစ္စည်းဖြစ်သည် ဟိုတယ်တွင်လက်ရာမြောက်သော guest ည့်သည်အခန်း ၁၅၀၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဘားဆယ်ခု၊ spa အဆောက်အဦ။ အခန်းအချို့သည်တိုကျိုဘူတာ၏ Marunouchi ဘက်ကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောရှုခင်းများဖြင့်မြင်နိုင်ပြီးဒေသများလည်းရှိသည် ဘယ်မှာတည်းခို guests ည့်သည်များအမိုးခုံး၏ဒီဇိုင်းများကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ဘူတာရုံသို့ဆင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် သူ့ဟာသူ။ Narita Express မှရောက်ရှိလာသော service ည့်သည်များအနေဖြင့်အိမ်တွင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်စေ့စပ်သေချာသည် Narita လေဆိပ်မှသို့မဟုတ်ရထားဖြင့်ရထားသည်တံခါးပေါက်မှတံခါးဝသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။ တိုကျိုဘူတာ၏အနီးတစ်ဝိုက်ရှိအစက်အပြောက်အနီးအနားအတွင်းမျိုးစုံရှုခင်းများကြည့်ခြင်းအစက်အပြောက်ရှိပါတယ် Marunouchi နှင့် Otemachi စီးပွားရေးခရိုင်များအပါအ ၀ င်တိုကျိုဘူတာမှလွယ်ကူစွာလမ်းလျှောက်နိုင်သည် နှင့် Imperial နန်းတော်။ အဆိုပါ Marunouchi ဘက်မှာတိုကျိုဘူတာ, အ Marunouchi ဝန်းကျင်မိုးမျှော်တိုက်အဆောက်အဦး၏ အဆောက်အ ဦး၊ Shin-Marunouchi အဆောက်အအုံနှင့် Japan Post Tower KITTE တို့သည် visitors ည့်သည်များကိုလာရောက်ရန်ဖိတ်ကြားသည် အများဆုံးကွဲပြားစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံများ။ ဤသုံးပါးအဆောက်အဦးမှာကျန်ကြွင်းသောအရပ်ကိုလည်းတိုကျို၏အနီရောင်အုတ်မျက်နှာစာတစ်ကောင်းတဲ့အမြင်ပူဇော် ဘူတာရုံ။ ဝေးကွာသော Imperial Palace နှင့် Imperial Palace အရှေ့ဥယျာဉ်တို့တည်ရှိသည် ယခင်ကအဲဒိုရဲတိုက်၏နေရာတွင်ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာခရီးစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ ထိုတိုကျိုဘူတာအကြောင်းကိုသိရန်အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဘူတာရုံအတွင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၌သင်လုပ်ဆောင်မည့်အရာများ၏အကြံဥာဏ်ကိုမျှော်လင့်မိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်အခြားဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်ရှုရန်၊ ယခုမျက်နှာပြင်ရှိလင့်ခ်များကိုနှိပ်ပြီးသို့မဟုတ် ဦး တည်ပါ ကျော်ဂျပန်ကနေဂျပန်လမ်းညွှန် dot com, သင့်ပြည့်စုံသော, ကို up-to-date ဖြစ်အောင်ခရီးသွားလမ်းညွှန်, ပထမဦးဆုံးလက်ရန်။ စောင့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စာရင်းသွင်းပြီးဂျပန်အကြောင်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုများအတွက်သတိပေးခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ပါ။ မင်္ဂလာရှိသောခရီးများ!
တိုကျိုဘူတာအကြောင်းကိုသိရန်7အရာ | japan-guide.com
< start="3.159" dur="5.491"> တစ်ရက်လျှင်ခရီးသည်သန်းတစ်ဝက်ကျော် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောတိုကျိုဘူတာသည်အလုပ်အများဆုံးသောဘူတာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="8.65" dur="1.52"> ဂျပန်မှာ။ >
< start="10.17" dur="5.45"> ဘူတာရုံသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကပင်အများပြည်သူအတွက်ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်လာသည် >
< start="15.62" dur="3.31"> ဂျပန်၏ကျန်မှတိုကျိုချိတ်ဆက်အချက်အချာ။ >
< start="18.93" dur="5.28"> တိုကျိုဘူတာသည်ရထားလိုင်းများစွာအတွက်သုညမိုင်အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ >
< start="24.21" dur="5.09"> ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးချစ်သောတိုကျိုဘူတာသည်နှစ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည် >
< start="29.3" dur="1.66"> နှင့်ဆောက်လုပ်ရေး။ >
< start="30.96" dur="5.759"> Marunouchi ဘက်ကိုမကြာသေးမီကရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဘုန်းအသရေအဖြစ် Yaesu အဖြစ်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည် >
< start="36.719" dur="4.191"> ဘက်ခေတ်မီခြင်းနှင့်ခေတ်ပြိုင်ကြည့်ပေးထားပါတယ်။ >
< start="40.91" dur="5.6"> ယင်း၏မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်နှင့်ကျယ်ပြန့်မြေအောက်ပူဇျောသက်ကာစျေးဝယ်၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနှင့်အတူထမင်းစားခန်း >
< start="46.51" dur="6.75"> နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, ကတိုကျိုဘူတာရုံနှင့်၎င်း၏အနီးတစ်ဝိုက်တွင်တစ်ရက်လုံးချိတ်ဆွဲဖြုန်းဖို့လွယ်ကူသည်။ >
< start="53.26" dur="8.54"> သင်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်တိုကျိုဘူတာနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သောအချက် (၇) ချက်ကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။ >
< start="61.8" dur="5.2"> JAPAN ရထားလမ်းCaféအဆိုပါ JAPAN ရထားလမ်းCaféက၎င်း၏မျိုး၏ပထမဦးဆုံးခဲ့ >
< start="67" dur="2.43"> ဂျပန်မှာဖွင့်လှစ်ရန် >
< start="69.43" dur="4.779"> တိုကျိုဘူတာ၏ Yaesu Central Gate နှင့်ဖြတ်ပြီးတည်ရှိပြီး၎င်းသည်ခရီးသွားခြင်းဖြစ်သည် >
< start="74.209" dur="5.541"> ကောင်တာများနှင့်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းမှုခရီးသွားများအတွက်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဂျပန် >
< start="79.75" dur="2.08"> ဟင်းလျာများ။ >
< start="81.83" dur="5.5"> JAPAN RAIL CAFE မှအတွင်းပိုင်းအလှဆင်ခြင်းနှင့်အမှတ်တရလက်ဆောင်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ပြောင်းလဲ၍ အာရုံစိုက်သည် >
< start="87.33" dur="4.36"> တစ် ဦး ချင်းစီအချိန်ဂျပန်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားဒေသ။ >
< start="91.69" dur="5.36"> အဆိုပါခရီးသွားတန်ပြန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုအပန်းဖြေအကြံဉာဏ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များအဖြစ် process ကိုအနည်းဆုံးန်ထမ်းများ >
< start="97.05" dur="3.769"> ရထားလမ်းနှင့်လက်မှတ်ဝယ်ယူမှု။ >
< start="100.819" dur="5.461"> ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်ခရီးစဉ်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်ပေးပါသည် >
< start="106.28" dur="1.95"> နေရာအသစ်သို့သွားရောက်ခြင်းအခါ။ >
< start="108.23" dur="6.62"> အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုကခရီးသွားဗီဒီယိုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများစွာကိုပြသသည်။ >
< start="114.85" dur="5.29"> ကဖေးသည်ပျူငှါနွေးထွေးသောပျင်းရိဖွယ်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်အချိန်လွန်ရန်အလွန်ကောင်းသည် >
< start="120.14" dur="2.86"> မပြုမီသို့မဟုတ်ရထားစီးနင်းပြီးနောက်။ >
< start="123" dur="4.91"> ညစာစားသူများသည်ဂျပန်ဟင်းလျာများကိုမျှော်လင့်နိုင်ပြီးအမျိုးမျိုးသောအရက်နှင့်တွဲဖက်နိုင်သည် >
< start="127.91" dur="2.64"> နှင့်အရက်မဟုတ်သောအချိုရည်။ >
< start="130.55" dur="5.18"> သေတ္တာများ Bento ဖွစျပါတယျ Takeaway လည်းအချိန်ပေါ်တိုတောင်းနေသောသူတို့အဘို့, ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ >
< start="135.73" dur="6.62"> နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကဖေးအပိုင်းတွင်အစဉ်အလာအရအလှဆင်ထားသော tatami ဖျာခင်းသည် visitors ည့်သည်များအားကမ်းလှမ်းသည် >
< start="142.35" dur="6.13"> အထိမ်းအမှတ်ဓါတ်ပုံတွေကိုယူတဲ့ photogenic နေရာတစ်ခု။ >
< start="148.48" dur="5.66"> တိုကျိုဘူတာတစ်ဦးလစ်လပ်အကြွေစေ့ Locker ရှာဖွေခြင်း ecbo ရင်ခွင်ဝန်ဆောင်မှု >
< start="154.14" dur="4.16"> အထူးသဖြင့်အထွတ်အထိပ်ရာသီတွင်အချည်းနှီးရှာဖွေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ >
< start="158.3" dur="4.76"> ecbo ရင်ခွင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ထိုအခက်အခဲများအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည် >
< start="163.06" dur="1.96"> အိတ်ကို-အခမဲ့နေ့ကထွက်။ >
< start="165.02" dur="4.56"> နေ့များစွာခရီးဆောင်အိတ်များစောင့်ရှောက်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကို ecbo ရင်ခွင်နှင့်လည်းကမ်းလှမ်းထားသည်၊ ၎င်းမှာကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် >
< start="169.58" dur="3.35"> နေ့ချင်းညချင်းခရီးသွားရန်အလင်းရောင်သွားလိုသူများအတွက်။ >
< start="172.93" dur="4.15"> တိုကျိုဘူတာထဲမှာမျိုးစုံ ecbo ရင်ခွင်ကောင်တာရှိပါတယ်။ >
< start="177.08" dur="4.95"> ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်များကိုကြိုတင်မှာယူပြီးဂေဘိုတွင်ငွေပေးချေပါ >
< start="182.03" dur="6.29"> မင်းရဲ့ခရီးဆောင်အိတ်တွေကိုဖယ်ဖို့နေ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ တ်ပြီးကောင်တာကိုသွားပါ။ >
< start="188.32" dur="5.43"> တိုကျိုဘူတာ Marunouchi အဆောက်အဦးမူလတိုကျိုဘူတာအဆောက်အဦဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် >
< start="193.75" dur="5.48"> ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းကထင်ရှားကျော်ကြားသောဂျပန်ဗိသုကာ Tatsuno Kingo နှင့် >
< start="199.23" dur="1.8"> 1914 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ >
< start="201.03" dur="6.32"> သို့သော်ဘူတာရုံအဆောက်အဦကြီးကြီးမားမား WW2 နှင့်တစ်ခုသာရိုးရှင်းသောဗားရှင်းစဉ်အတွင်းပျက်စီးခဲ့သည် >
< start="207.35" dur="3.15"> အဆောက်အ ဦး ၏စစ်ပွဲပြီးနောက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ >
< start="210.5" dur="5.25"> ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းဘူတာရုံအဆောက်အအုံကိုစစ်မတိုင်မီကပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ >
< start="215.75" dur="4.86"> ထို့နောက်တငျ့တယျခံရဖို့ဘူတာရှေ့တွင်အတွက် Plaza များအတွက်အခြားငါးနှစ်ယူခဲ့ပါတယ်။ >
< start="220.61" dur="4.95"> ဒီကနေ့, ည့်သည်တွေကတော့တိုကျိုဘူတာကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ် >
< start="225.56" dur="7.68"> ၁၉၁၄ တွင်မြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ဘက်စွန်းပိုင်းရှိအမိုးခုံးများဖြင့်ပြည့်စုံသည်။ >
< start="233.24" dur="5.1"> တိုကျိုဘူတာပြခန်းအဆိုပါတိုကျိုဘူတာပြခန်းတစ်ခုအနုပညာပြတိုက်ဖြစ်ပါသည် >
< start="238.34" dur="3.33"> တိုကျိုဘူတာရုံ Marunouchi အဆောက်အ ဦး အတွင်း၌တည်ရှိသည်။ >
< start="241.67" dur="4.15"> ယာယီပြပွဲအပြင်, ပြခန်းအချို့ကြည့်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် >
< start="245.82" dur="5.62"> မူရင်း brickwork နှင့်တစ်မူထူးခြားသောကမ်းလှမ်းရာတိုကျိုဘူတာ၏ပြည်တွင်းရေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်း, >
< start="251.44" dur="5.15"> အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၏ရောစပ်။ >
< start="256.59" dur="3.75"> တိုကျိုဘူတာမှတစ်ဆင့်ခရီးသွား Shopping ည့်သည်များနှင့်ခရီးသွားလာခြင်းသည်ဘယ်တော့မှဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ် >
< start="260.34" dur="5.14"> ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့သို့မဟုတ်မ may လိုအပ်နိုင်ပါသည်တစ်ခုခုရှာတွေ့မဟုတ်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်။ >
< start="265.48" dur="4.47"> билетသည့်withinရိယာအတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဈေးဆိုင်များစွာရှိသည် >
< start="269.95" dur="2.64"> တိုကျိုဘူတာရုံ၏အခမဲ့toရိယာဝင်ရောက်ခွင့်၌တည်၏။ >
< start="272.59" dur="5.72"> အဆိုပါလက်မှတ်ဧရိယာအတွင်း Gransta နှင့် ecute စျေးဝယ်ဖြစ်ကြပြီးရှိရာတဦးတည်းဒေသများညစာစား >
< start="278.31" dur="6.32"> သွားရန်သွားရန်အစားအစာများ၊ အချိုပွဲများနှင့်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများစွာကိုရှာဖွေနိုင်သည် >
< start="284.63" dur="7.42"> Ekibenya Matsuri, တစ်နိုင်ငံလုံးမှ boxed နေ့လည်စာရောင်းချနေတဲ့နာမည်ကြီး bento စတိုးဆိုင်။ >
< start="292.05" dur="4.38"> access ကိုဧရိယာမှအခမဲ့အတွက်အပြင်ဘက်မှာမီးဖိုချောင်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်အများအပြားစားသောက်ဆိုင်များ၏တဦးတည်း >
< start="296.43" dur="6.53"> ထမင်းစားခန်းအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းဇုန်။ >
< start="302.96" dur="5.45"> The Tokyo Station Hotel Tokyo Station Hotel ကို ၁၉၁၅ တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် >
< start="308.41" dur="5"> ရေခြားမြေခြားများနှင့်ဒေသအလိုက်ထံမှပုံမှန်ဧည့်သည်များမှဇိမ်ခံဟိုတယ်တွေကိုကူညီနေတဲ့။ >
< start="313.41" dur="4.82"> တိုကျိုဘူတာရုံ Marunouchi အဆောက်အအုံအတွင်း၌တည်ရှိပြီးဂန္ထဝင်ဥရောပပုံစံဇိမ်ခံပစ္စည်းဖြစ်သည် >
< start="318.23" dur="5.46"> ဟိုတယ်တွင်လက်ရာမြောက်သော guest ည့်သည်အခန်း ၁၅၀၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဘားဆယ်ခု၊ >
< start="323.69" dur="2.47"> spa အဆောက်အဦ။ >
< start="326.16" dur="5.01"> အခန်းအချို့သည်တိုကျိုဘူတာ၏ Marunouchi ဘက်ကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောရှုခင်းများဖြင့်မြင်နိုင်ပြီးဒေသများလည်းရှိသည် >
< start="331.17" dur="5.24"> ဘယ်မှာတည်းခို guests ည့်သည်များအမိုးခုံး၏ဒီဇိုင်းများကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ဘူတာရုံသို့ဆင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် >
< start="336.41" dur="1.5"> သူ့ဟာသူ။ >
< start="337.91" dur="5.47"> Narita Express မှရောက်ရှိလာသော service ည့်သည်များအနေဖြင့်အိမ်တွင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်စေ့စပ်သေချာသည် >
< start="343.38" dur="8.17"> Narita လေဆိပ်မှသို့မဟုတ်ရထားဖြင့်ရထားသည်တံခါးပေါက်မှတံခါးဝသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။ >
< start="351.55" dur="6.31"> တိုကျိုဘူတာ၏အနီးတစ်ဝိုက်ရှိအစက်အပြောက်အနီးအနားအတွင်းမျိုးစုံရှုခင်းများကြည့်ခြင်းအစက်အပြောက်ရှိပါတယ် >
< start="357.86" dur="5.75"> Marunouchi နှင့် Otemachi စီးပွားရေးခရိုင်များအပါအ ၀ င်တိုကျိုဘူတာမှလွယ်ကူစွာလမ်းလျှောက်နိုင်သည် >
< start="363.61" dur="2.04"> နှင့် Imperial နန်းတော်။ >
< start="365.65" dur="5.14"> အဆိုပါ Marunouchi ဘက်မှာတိုကျိုဘူတာ, အ Marunouchi ဝန်းကျင်မိုးမျှော်တိုက်အဆောက်အဦး၏ >
< start="370.79" dur="5.439"> အဆောက်အ ဦး၊ Shin-Marunouchi အဆောက်အအုံနှင့် Japan Post Tower KITTE တို့သည် visitors ည့်သည်များကိုလာရောက်ရန်ဖိတ်ကြားသည် >
< start="376.229" dur="3.851"> အများဆုံးကွဲပြားစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံများ။ >
< start="380.08" dur="5.089"> ဤသုံးပါးအဆောက်အဦးမှာကျန်ကြွင်းသောအရပ်ကိုလည်းတိုကျို၏အနီရောင်အုတ်မျက်နှာစာတစ်ကောင်းတဲ့အမြင်ပူဇော် >
< start="385.169" dur="1.411"> ဘူတာရုံ။ >
< start="386.58" dur="5.22"> ဝေးကွာသော Imperial Palace နှင့် Imperial Palace အရှေ့ဥယျာဉ်တို့တည်ရှိသည် >
< start="391.8" dur="6.02"> ယခင်ကအဲဒိုရဲတိုက်၏နေရာတွင်ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာခရီးစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ >
< start="397.82" dur="3.5"> ထိုတိုကျိုဘူတာအကြောင်းကိုသိရန်အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ >
< start="401.32" dur="4.21"> ဘူတာရုံအတွင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၌သင်လုပ်ဆောင်မည့်အရာများ၏အကြံဥာဏ်ကိုမျှော်လင့်မိသည်။ >
< start="405.53" dur="5.78"> ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်အခြားဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်ရှုရန်၊ ယခုမျက်နှာပြင်ရှိလင့်ခ်များကိုနှိပ်ပြီးသို့မဟုတ် ဦး တည်ပါ >
< start="411.31" dur="6.199"> ကျော်ဂျပန်ကနေဂျပန်လမ်းညွှန် dot com, သင့်ပြည့်စုံသော, ကို up-to-date ဖြစ်အောင်ခရီးသွားလမ်းညွှန်, ပထမဦးဆုံးလက်ရန်။ >
< start="417.509" dur="1"> စောင့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="418.509" dur="5.131"> စာရင်းသွင်းပြီးဂျပန်အကြောင်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုများအတွက်သတိပေးခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ပါ။ >
< start="423.64" dur="0.86"> မင်္ဂလာရှိသောခရီးများ! >